हाम्राे पिपलबाेट » ढाड किन दुख्छ ? कसरी कम गर्ने ? ढाड किन दुख्छ ? कसरी कम गर्ने ? – हाम्राे पिपलबाेट
ढाड किन दुख्छ ? कसरी कम गर्ने ?
धेरै सुत्दा, टिभी हेर्दा, मोबाइल र ल्यापटप चलाउँदा ढाड र कम्मर दुख्ने समस्याले सताएको होला१ अहिलेको अवस्थामा ढाड र कम्मर दुखाइबाट कसरी बच्ने, दुखेपछि के गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान भयो भने सजिलै बच्न सकिन्छ।
के बढ्दो उमेरसँगै र बुढेसकालमा गएर ढाड तथा कम्मर दुखाइ हुनै पर्ने हो त ?
ढाड दुखाइ के हो र कम्मर दुखाइ अर्थात् ुसाइटिकाु के हो भन्ने बुझ्न हामीले हाम्रो मेरुदण्डको बनोटबारे बुझ्न जरुरी छ।
३३ टुक्रा स–साना हाड मिलेर बनेको हाम्रो शरीरको मुख्य भाग हो मेरुदण्ड। यसमा गर्धनदेखि हिपसम्मका भाग पर्छन्। मेरुदण्डका हड्डीलाई भर्टेब्रा भनिन्छ भने यी भर्टेब्रालाई आपसमा लचकदार कुरकुरे हाड ९भर्टेब्रल डिस्क०ले छुटाएको हुन्छ जसले दुई हाडबीच घर्षण हुन दिँदैन। मेरुदण्डका यी स–साना हड्डी र डिस्कलाई लिगामेन्टसले लामबद्ध बनाएर राख्छ जसलाई हामी मेरुदण्ड भन्छौं।
यही मेरुदण्डको बीच भागबाट ३१ जोडा सुषुम्ना नाडी हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण भागमा टाउकोदेखि खुट्टासम्म गएका हुन्छन् जसले शरीरका सम्पूर्ण भागबाट समवेदना ९पोल्नु, चिसो हुनु, दुख्नु आदि०हरु दिमागसम्म ल्याउने र दिने काम गर्छन्। यही नसाहरू थिचिने, च्यापिने भएमा जुन भागमा थिचिएको हो त्यो भागमा दुखाइ उत्पन्न हुन्छ जसलाई हामी ढाड दुखाइ अथवा कम्मर दुखाइ भनेर बुझ्छौं।
स्वस्थ र निरोगी रहन हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह आफैंले गर्नुपर्छ अरुले गरिदिएर हुँदैन। अरुले त सल्लाह र सहयोग गरिदिने मात्र हो। त्यसैले सधैं स्वस्थ रहन उचित खानपानका साथै उचित शारीरिक गतिविधि र उचित विचार गरौं। आफू पनि स्वस्थ रहौं र अरुलाई पनि स्वस्थ रहन प्रेरित गरौं। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा। योग प्रशिक्षक
स्रोत : https://www.setopati.com/blog/273150
२१ जेष्ठ २०७९ मा प्रकाशित